Tsangambato faha 10 taona SEFALA SP37, rakitra SEFALA 2021 – FJKM-Gland
Tsangambato faha 10 taona SEFALA SP37, rakitra SEFALA 2021
Posté le 24/02/2021 05/03/2021 par Ranaivo Razakanirina
“ Hitory ny anaranao amin’ny rahalahiko aho; eo amin’ny fiangonana no hiderako Anao ” Salamo 22:22
Tsangam-bato fahafolo taona
Ankalazaina mandritra ity taona 2021 ity ny tsingerintaona niorenan’ny SEFALA (Sekoly Fanomanana Laika) eto anivon’ny Synodamparitany misy antsika.
Notanterahina ny sabotsy 6 febroary 2021 lasa teo tany Paris ny fanompoam-pivavahana nisaorana sy nanomezam-boninahitra an’Andriamanitra noho izany tsingerintaona izany.
Ny tsangambato faha 10 taona dia fanolorana fitaovana entina mampianatra eo anivon’ny Sekoly. Ireto avy izany:
Misy valopy enti-manohana izany ezaka tsangambato izany natolotra antsika fiangonana. Koa entanina isika ry havana hanatona tsy am-pisalasalana ny Mpitam-bola ho antsika izay maniry handray anjara amin’izany valopy izany.
Raha ny momba ny fiofanana kosa no resahina dia manentana antsika mpiara-mivavaka izay maniry handray anjara amin’ny fiofanana tanterahin’ny SEFALA Synodamparitany mba hifandray amin’ny Biraompiangonana.
Rakitra fanohanana taona 2021
Tiana ny mampatsiahy antsika fa tanterahintsika ny alahady 7 martsa 2021 izao, any Saint-Julien, ny rakitra faharoa izay entina hanohanana ny SEFALA Synodamparitany mandritra ny taona 2021. Isaorana antsika hatrany ry havana amin’ny fanohanana izany Sekoly izany.
This entry was posted in Newsletter Mars 2021. Bookmark the permalink.